ဒသာကောက် Archives - Latest Myanmar News
ဒသာကောက်ကိန်းအရ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ဖွားများရဲ့ တစ်သက်တာကံကောင်းချိန်၊ကံညံ့ချိန်
May 7, 2021 by Latest Myanmar News
ဒသာကောက်ကိန်းအရ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ဖွားများရဲ့ တစ်သက်တာကံကောင်းချိန်၊ကံညံ့ချိန်အသက်အပိုင်းအခြားများ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ဖွားတွေလို့ ပြောရတာကတော့ မနက်ပိုင်းပဲမွေးမွေး၊ညနေ ရာဟုချိန်ပဲမွေးမွေး အခုဒသာ ကောက်ကိန်း တွေက အကျုံးဝင်ပါလိမ့်မယ်။ ရာဟုမို့လို ဒသာအသက်အပိုင်းအခြားသီးသန့်ရယ်လို့မရှိပါဘူး…။ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ဖွားများရဲ့ ကံကောင်းချိန်တွေကတော့….. အသက် ၂နှစ် ၁လ ၁၅ရက်မှ….အသက် ၄နှစ် ၃လအထိကာလအတွင်း အသက် ၁၇နှစ်တင်းတင်း ပြည့်ချိန်မှ…. အသက် ၁၈နှစ် ၃လ အထိကာလအတွင်း အသက် ၄၃နှစ် ၇လ ၁၅ရက် မှ…. အသက်၄၆နှစ်အထိ ကာလအတွင်း အသက် ၅၅နှစ်တင်းတင်းပြည့်ချိန်မှ …..အသက်၅၆နှစ် ၆လ အထိကာလအတွင်း အသက် ၇၁နှစ် ၁လ ၁၅ရက်မှ….. အသက် ၇၃နှစ် ၉လအထိ ကာလအတွင်းများသည်..ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ဖွားတွေအတွက် ကံကောင်းချိန်တွေပါပဲ… ဒီမှာပြောစရာရှိတာက အသက် ၁၉နှစ်လောက်ကနေ..အသက် ၄၃လောက်ထိက ကံမကောင်းဘူးလားလို့ မေးစရာရှိပါတယ်… … Read more
Categories ေဗဒင္ Tags ဒသာကောက် Leaveacomment
ဒသာကောက်ကိန်းအရ အင်္ဂါသားသမီးများအတွက် တစ်သက်တာ ကံကောင်းချိန်၊ကံညံ့ချိန်များ
May 3, 2021 by Latest Myanmar News
ဒသာကောက်ကိန်းအရ အင်္ဂါသားသမီးများအတွက် တစ်သက်တာ ကံကောင်းချိန်၊ကံညံ့ချိန်များ ဒီနေ့ အလှည့်ကျတာကတော့ အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက် ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဒသာကောက်ကိန်းတွေဟာ လူတော်တော်များများ အတွက် ၇၀% မှန်ကန်လေ့ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လဲ အင်္ဂါနေ့ဖွားဖြစ်တာမို့ ကံကောင်းချိန်၊ ကံညံ့ချိန်တွေအလိုက် ချိန်ဆပြီးဆောင်ရွက်လေ့ရှိပါတယ်။ ကံကောင်းခါနီးအချိန်တွေမှာ ဘာ တွေကြိုပြင်ထားမလဲ…. ကံကောင်းချိန်မှာ အဆင်သင့်ဖြစ်ဖို့ လိုပါတယ်။ မိုးတော့ရွာပါရဲ့ ခံစရာအိုးမရှိသလိုမျိုး၊ နေတော့ပူပါရဲ့ စပါးလှန်ဖို့ အဆင်သင့်မလုပ်ထားရင်လဲ အဆင်မပြေသလိုပါပဲ။ ဒီလိုပါပဲ…ကံညံ့တော့မယ့် ကာလတွေ ရောက်ခါနီးမှာ လောဘ၊ဒေါသ၊မောဟနည်းအောင် ကြိုတင် ပြင် ဆင်ထားဖို့လိုတယ်။ ငွေတွေမလိုအပ်ရင် မသုံးစွဲဖို့လိုတယ်… ၊ခရီးရှည်ထွက်ဖို့ပြင်ဆင်ရသူလိုပဲ။ကံညံ့ချိန်တွေမှာ အဓိဌာန်တွေ ကြိုဝင်ထားခြင်းဖြင့်…အညံ့အဆိုးတွေလဲ သိသာစွာလျော့ပါးသွားစေနိုင်ပါတယ်…။ ဇာတာရှင်အင်္ဂါနေ့ဖွားတွေအတွက် အသက် ၅နှစ် တင်းတင်းပြည့်ချိန်မှ…အသက် ၆နှစ်တင်းတင်းပြည့်ချိန် အတွင်းကာလ အသက် ၁၆နှစ် ၆လ မှစ၍ …အသက် ၁၈နှစ် … Read more
ဒသာကောက်ကိန်းအရ တနင်္လာသားသမီးများအတွက် တစ်သက်တာ ကံကောင်းချိန်၊ကံညံ့ချိန်များ
May 2, 2021 by Latest Myanmar News
ဒသာကောက်ကိန်းအရ တနင်္လာသားသမီးများအတွက် တစ်သက်တာ ကံကောင်းချိန်၊ကံညံ့ချိန်များ အရင်နေ့က တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့ ဒသာအပိုင်းအခြားတွေကို ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ တနင်္လာသားသမီးတွေရဲ့ တစ်သက်တာကံကောင်း၊ကံညံ့သောဒသာကာလလေးတွေကိုပြောပေးလိုက်ပါမယ်။ လူငယ် လူရွယ် တွေအနေနဲ့ မိမိရဲ့ ကောင်းတဲ့ဒသာတွေကျရောက်နေချိန်မှာ ပိုမိုအားထည့်ပြီး ကြိုးစားနိုင်ဖို့နဲ့ ကံညံ့တဲ့ဒသာနှစ်ပိုင်းတွေ ဖြတ်သန်းချိန်မှာတော့ သတိ၊ ဉာဏ်ပညာဦးဆောင်ပြီး ဖြတ်သန်းသွားနိုင်ဖို့ အထူးရည်ရွယ်ပါတယ်။ ကဲစကြရအောင် တနင်္လာသားသမီးတွေရဲ့ အသက် ၇နှစ် ၆လ ပြည့်ချိန်မှ… အသက် ၉နှစ် ၊ ၄လ၊ ၁၅ရက်အတွင်း ကာလ အသက် ၁၈နှစ် တင်းတင်းပြည့်ချိန်မှ ….အသက်၁၉နှစ် တင်းတင်းပြည့်ချိန်အတွင်း ကာလ အသက် ၂၇နှစ် ၃လ ပြည့်ချိန်မှ….အသက် ၂၉နှစ် ၄လ ၁၅ရက်အတွင်းကာလ အသက် ၄၁နှစ် ၃လ ပြည့်ချိန် မှ အသက် … Read more